Ruushka oo Golaha Ammaanka uga adkaaday Maraykanka & Washington oo u bayraysa dhanka Golaha Guud ee QM (Farqiga u dhexeeya?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Ruushka oo Golaha Ammaanka uga adkaaday Maraykanka & Washington oo u bayraysa...
Ruushka oo Golaha Ammaanka uga adkaaday Maraykanka & Washington oo u bayraysa dhanka Golaha Guud ee QM (Farqiga u dhexeeya?)
(New York) 26 Feb 2022 – Ruushka ayaa hor istaagey qaraar uu Golaha Ammaanku shalay kasoo saari lahaa xiisadda Ukraine laguna dalban lahaa in uu Ruushku ciidamadiisa ka saaro geyiga dalkaasi.
11 xubnood oo ka mid ah 15ka xubnood ee GA ayaa u codeeyey qaraar Maraykanku keenay, halka Shiinaha, Hindiya iyo Imaaraadka Carabtu ay ka aamuseen.
Hindisahan oo ay Maraykanka la waddey Albania ayaa Moscow ugu baaqi lahaa in ay deg deg ciidamadooda uga saaraan Ukraine ayna joojiyaan cunfiga iyo awood sheegadka, islamarkaana ay ka noqdaan aqoonsiga Donetsk iyo Lugansk.
Yeelkeede, maadaama uu Ruushku ka mid yahay 5 dal oo rigli ah oo ku jira Golaha Ammaanka wuxuu qaraarkii saaray diidmo qayaxan (VETO), balse Maraykanka ayaa ku dooday in aanu Ruushku haysanin taageero caalami ah.
Washington ayaa haatan u weecanaysa dhanka Golaha Guud ee QM oo ah halka ay dunidu ku dhan tahay, kaasoo aan qaraarkiisa VETO la saari karin, balse aan lahayn awood sharci ah sidaa darteed aanay dalalku ku khasbanayn inay adeecaan.
Previous articleSida uu MW Ukraine uga soo baxay nabsiga Falastiiniyiinta & nin u jawaabey xilligaas oo uu warkiisii soo baxay (Arag waxa uu yiri)
Next articleMaraykanka oo xayiraad saaray shakhsiyaad “carqaladaynaya” doorashada Somalia